नयाँ दैनिक | लेखनाथ न्यौपाने किन आए पोखरा ? लेखनाथ न्यौपाने किन आए पोखरा ? – नयाँ दैनिक
पोखरा २७, पुस । युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने पोखरा आइपुगेका छन् । सत्तारुढ दलका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता न्यौपाने आफैँले लेखेको ‘संघर्षको इतिहास’ नामक पुस्तकको परिचर्चा कार्यक्रममा पोखरा आएका हुन् । उनले लेखेको कृतिमाथि प्रगतिशील लेखक संघ, कास्कीले परिचर्चा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कृति र नेपाली राजनीतिबारे ५ जना वक्ताहरुले चर्चा र वहस चलाउने आयोजकले बताएको छ ।
नेकपाकै नेता सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, झलकपाणी तिवारी, वाम वुद्धिजीवी प्रा.डा. तारा बराल, डा. कृष्णराज अधिकारी र पिएन क्याम्पसको स्ववियुका पूर्वसभापति तथा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले कृति र विचारबारे पनि वहस गर्नेछन् । संघर्षको इतिहास कृतिसँगै न्यौपानेले विचारको वहस चर्काउने बताइएको छ ।
नेकपाभित्रका स्वच्छ छविका आशालाग्दा युवा नेता वैचारिक वहसका लागि आउने भएपछि भोलि शनिबार वृहत राजनीतिक जमघट हुने प्रलेसंघ कास्कीका अध्यक्ष भिम रानाभाटले दावी गरेका छन् । कार्यक्रम सिर्जनाचोकको ह्वाइट हाउस पार्टी प्यालेसमा बिहान ११ बजे सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ । नेता न्यौपानेले पछिल्लो समय आफ्नै पार्टी र सरकारका पनि नकरात्मक कामको सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।
अखिल (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका नेता न्यौपाने अध्ययनशील, तार्किक र प्रभावशाली वक्ता मानिन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलन, दर्शनशास्त्र, समाजवाद र राजनीतिक अर्थशास्त्रबारे लेखिएको ‘संघर्षको इतिहास’ न्यौपानेको दशौँ कृति हो ।